2016 Happy New Year ကိုနိုင်ငံခြားသွားရင်းကြိုဆိုချင်သူများအတွက် Special Promotion!!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » 2016 Happy New Year ကိုနိုင်ငံခြားသွားရင်းကြိုဆိုချင်သူများအတွက် Special Promotion!!!	6
Posted by သျှားသက်မာန် on Dec 3, 2015 in Travel |6comments
မင်္ဂလာပါရှင်…..ဒီဇင်ဘာလChristmas Promotion အတွက်..ဘန်ကောက်-ပတ္တရား..(၅ညအိပ်/၆ရက်)ခရီးကို…..တစ်ဦးလျှင်.ဒေါ်လာ ၅၅၅ နဲ့ ရှိနေပါပြီနော်…အရမ်းတန်ပြီး…နေရာစုံတောင်ရောက်ဦးမှာနော်..
Booking နောက်ဆုံးလက်ခံတဲ့ ရက်လေးကတော့ ၂၀ ရက် ဒီဇင်ဘာပဲဖြစ်ပါတယ်…..
Hotline- 09 78 2220 683
– ပတ္တရားကမ်းခြေရဲ့ မျက်စီပသာဒဖြစ်ဖွယ်အခမ်းအနားပြင်ဆင်မှုများနှင့် Alcaza Lady Boy show
– ရင်သပ်ရှုမောစရာကောင်းတဲ့ Coral Island
– မသွားမဖြစ်သွားရမယ့်..Pattaya View Point, – ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးသစ်ပင်ပန်းမာန်များဖြင့်အလှဆင်ထားသည့် Nong Nooch Garden
– International Buffet Dinner ကိုအ၀စားရမယ့်…နာမည်ကြီးRestaurant
– ဘန်ကောက်၏နာမည်ကျော် မြဘုရားနှင့် ဘုရင့်နန်းတော်
– 3D ပန်းချီကားများဖြင့် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး
အံ့မခန်းဓါတ်ပုံတ၀ကြီးရိုက်နိုင်မယ့်..Art in Paradise
– ရှိုးပွဲများဖြင့်စိတ်ဝင်စားပျော်ရွှင်ရမည့် Safari World
– ရှေးဟောင်းဘုရားများကိုဖူးမြင်နိုင်မည့် အယုဒ္ဓယမြို့ဟောင်း
– Shopping centre တို့တွင် ဈေးဝယ်ထွက်ရမည့်အစီအစဉ်များဖြင့် စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင် …
ငုရင်ထရန် ဟုရန်မေ ရဲ့ ကိုကိုး says: သွားနိုင်သေးပါဘုတော်
ကျော့မိတ်ဆွေ ဂျော်လကီ အောင်လဘု တွက် ဂျပန်ကိရိယာ တစ်ခု လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်ချင်လို့ပါ
kai says: ငုယင်တယောက်… ၆လက်မလောက်ဒေါက်ကြီးနဲ့တောင် ဗမာအမျိုးသမီးတွေလို.. တင်တွေမြင့်ထွက်မလာ..။
ငုရင်ထရန် ဟုရန်မေ ရဲ့ ကိုကိုး says: တို့က အော် ကွဲ့ မောင်လေးရဲ့
မောင်လေးသာ အတုနဲ့ မမိစေနဲ့
သျှားသက်မာန် says: ခွီးခွီး ဟီးဟီး
Mike says: .တစ်ဦးလျှင်.ဒေါ်လာ ၅၅၅ နဲ့ 
.မိသားစု၎ဦး=၂၈၈၆၀၀၀…ငိငိ…တွားနိုင်တေးဘု… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: မသွားနိုင်သေးဘူး ပိုက်ဆံစုဦးမယ်။